Umthetho WOKUBUYISA -
ZONKE IINDAWO ZEZITHILI ZIQHELEKILEYO, AKUBAFUNDI. UKUQHUBEKA KUNYE.
Unokukhansela umyalelo wakho emva kokuba kwenziwe kwithuba lokuqala lwe-24. Ukukhanselwa kuthathwa njengembuyiselo kwaye asiyi kuhlonipha nayiphi na ihoxiso emva kokuba i-24 ikhefu ihambe. Ngokusekelwe kukuqonda kwethu singavumela utshintsho lomyalelo, ukuba sivumela ukuguqulwa komyalelo kuya kuba khona umyalelo utshintshe umrhumo we-$ 15.
Isicelo sokutshintshana KUMELE kwenzeke kwiintsuku zokuqala ze-7 emva kokuba iphakheji yakho ikhona nikelwe. Kwiimeko ezizodwa ezisekelwe kuphela kwi-My Natural Hair Extensions zikhetha ukutshintshisana kunokunokwenzeka. Ukuze ukwazi ukutshintshisa iinwele zakho zonke iinwele kufuneka zibuyiselwe zingagqitywanga, ezingahambelwanga nazo zonke i-tags kunye neempawu ezinqamlekileyo kwiintsuku zokuqala ze-7 zokuhanjiswa. Naluphina utshintsho luyakuthintela utshintsho lweenwele. Oku kubandakanya kodwa akukhawulelwanga kuyo nawaphi na iinwele eziye zahlulwa, zidibene, zidibeneyo, zitshatiwe. Naluphi na unwele olumanzi, oludayiweyo, olucwecwe okanye olusisigxina lungenakutshintshana
Umzekelo isizathu sokuba le ayinakho ukunikezela i unaniso "Ndandifuna into enye" ​​okanye "oku nje ndifuna" kumelwe ukuba kubekho ngumba obalulekileyo kunye imveliso okanye impazamo eyenziwe yi MNHE. Inwele yimveliso yokucoceka, xa sele isishiyile isikhungo sethu asinakuyisebenzisa kwakhona okanye siyithengisa xa ivuliwe ngumthengi. Ngako-ke ukutshintshiselwa kwethu kunye nomgaqo-mali wokubuyisela imali.
Kukho umrhumo wokubuyisela we-$ 20 kuzo zonke iindleko ezivumelekileyo, ukukhansela, kunye nokutshintshana okuhlangabezana neemfuno zethu zokutshintshiselana.
Ngomthetho we-LAW ne-Florida Health Regulations I-Natural Hair Hair Extensions LLC inyanzelekile kwaye iyafuneka ukuba ifakekele le migangatho. Asiyi kwenza nayiphi na into.
Ukuba sinquma ukuvumela ukuba abathengi abathengiselwano banembopheleleko yokuthumela iindleko zokuthumela. UMNYE akayi kuhlawulela okanye abuyisele abathengi nayiphi na imali yokubuyiswa kwemali yangaphandle okanye yasekhaya.
Njengaye nayiphi na inkampani, nayiphi na ithengi ethengiweyo kuthengiswa, kunye nekhowudi yokuphuhlisa, okanye izinto zokukhupha ziya kuba ukuthengiswa kokugqibela.
shiya izimvo Rhoxisa impendulo
Ewe, ndidibanise uluhlu lwakho lokuposa